Maitiro ekudzima karenda mu macOS | Ndinobva mac
Kana isu tiri mumwe wevanhu ivavo vanokanganwa zvinhu uye vanogara vachisarudza kunyora zvese pasi pechirongwa, zvingangoita kuti kana tichida kuchengetedza kurongeka uye konzati mune yedu ajenda, isu takagadzira makarenda akasiyana siyana, kuitira kuti zviitiko zvionekwe mumarudzi akasiyana, izvo zvinotibvumidza kuti tikurumidze kuziva kuti chiitiko chei chiitiko.
Kugadzira makarenda akasiyana kwakakosha seku vachengete zvakarongeka, pamwe nekuziva iyo inoenderana ruvara, saka pakatarisa tinoziva kuti takabatikana sei kuti tichava nezuva. Asi, zvakakoshawo kuti huwandu hwadzo huderedzwa, kuti ugone kuwedzera zviitiko nekukurumidza uye pasina kuvhiringidzika kana uchigadzira zviitiko zvitsva.
Kana zvasvika pakuisa kurongeka mukarenda yedu, macOS, inotipa dzakateedzana sarudzo dzingatibvumidze isu, pakati pezvimwe zvinhu, bvisa ese makarenda iwo atisisiri kuzoshandisa Kana, isu tinogona kusanganisa boka remakarenda kana zviitiko zvatakanyora mazviri zvakafanana uye kuva nazvo zvakaparadzaniswa rave dambudziko redzidziso, nekuti zviitiko zvinopindirana, kupfuura mhinduro inogoneka yezuva nezuva.
Delete makarenda mu macOS
Chekutanga pane zvese, isu tinofanirwa tinya pane iyo icon iri padoko inomiririra application Calendar.
Kana tangovhura, tinoenda kumusoro kuruboshwe uye tinya pane bhatani Makarenda, kuitira kuti makarenda ese atakagadzira paMac edu aratidzwe uyezve iwo aripo pane ese maIOS, kana isu takambozvigadzirisa.
Kudzima kalendari, isu tinongofanirwa kuyanika pamusoro payo uye tinya bhatani rekurudyi kana neminwe miviri pane trackpad. Kubva pane yemukati mamenyu inoonekwa, isu tinofanirwa kusarudza Delete. Muhwindo rinotevera, tinosimbisa kuti tinoda kudzima karenda uye kugadzirisa. Karenda yacho yanyangarika kubva pakurongwa kwedu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Tutorials » Maitiro ekudzima karenda pane macOS
Tim Cook Anotora chikamu muDuke University Kupedza kudzidza